[Home][Nala soo xiriir]
aabbaha aan jeclahay oo samada joogow waan ogahay in dembi sameeyey
laakiin waxaa aamisanahay in wiilkaa ciise oo u dhintay aniga dembigeyga dartiis
waan qaadanayaa hadda qalbigeyga inuu yimaado yahayna badbaadiya heyga waxaan
ka codsanaayaa inuu dembigeyku dhiigiisa dhakho ciise masiixow sayidgeygoo
i caawi aniga waan ku aamisanahay adiga kuu adeegayaa.
Maxaa kitaabka Qaduuska ah .,hadalka ilaah Dhahayaa.
Batbaadada Runta ah .
tani waa marag furit(maragguna waa kani kaas oo ah in ilaaha ina siiyey nolosha waligeed ah.
oo ay noloshu wiilkiisa ku jirto.
waxaan rumeysnahay in uu hal ilaah uu jiro oo ah ilaaha nolosha (baxniintii20,:2.3)
kaas oo ah aabbaha wiilka iyo ruuxa qoduuska ah rabbigayagow ilaahayagaw adiga
waad waad istaahishaa inaad heshid ammanta iyo cisada iyo xoogga .waayo wax kasta adaa
abuuray maxaa yeelay doonistaada aawadeed ayay uahaadeen.(muujintii:4:11:5:9.10)
waan fahmay in ciise masiix ahaa messian oo ah hadal hadalkuna jidh buu noqday oo waa ina
dhex joogay (y00xanaa.1:1.14) waa aamisanahay taas aawadeed ayuu wiilka ilaah umuuqday
inuu baabiyo shuqullada ibliiska(1.yooxanaa.3:8)isagu hubkuu ka qaaday taliyayaasha iyo
kuwa amarka leh.(kolosay.2:15)
waan rumeysnahay in ilaah jaceylkiisa i tusay aniga sabatoo oo ah markaan dembiilayaa ahayn
ayuu masiixa inoo dhintay. taas oo cadeyneysa. laakiinse masiixu waa inoo dhintay intaynu
weli dembiilayaal ahayn. oo sidaasuu ilaah jaceylkiisii inoogu muujiyey(rooma.5;8)
waan rumeysnahay in isagu uu inaga samata bixiyey xoogga gudcurka oo wuxuu inoo bedelay
boqortooyadii wiilka jacaylkiisa. kaasoo aynu ku leennahay madax furusho ah dembidhaafka.
waan rumeysnahay in masiixa la.aantii waxba samenkarin . anaa ah geedka canabka ah idinna
waxaad tihiin laamihii . kii igu jira oo aanna aan ku jiro. kaasi midho badan dhala. maxaa yeelay.
la.aantey waxba ma sameyn kartaan.(joxaanaa15:5)waxaa abbahay ku aam maanmaa. inaad
midho badan dhashaan .waxaadna noqon doontaan xerteyda(yooxaana.15:8)waxaan ku
ogeysiinayaa sheydaan yahow in ciisa masiix yahay sayidkeyga oo waan tuuray wax kasta oo
sheydaanku la xariira oo nalosheyda ah.
waan rumeysnahay siduu yahay jacaylka aabbuhu in siiyey taasoo ah in laynoogu yeedo
caruurta ilaah(1yooxanaa3:1-3)oo innagana isaggii buu inala soo sara kiciyey oo wuxuu
isagii inala fadhiisiyey meelaha janada xagga ciisa masiix(efosos-2:6)waan rumeysnahay
inaynu ku badbaadnay nimco xagga rumeysadka mana aha xagga shuqullada. si aan
ninna ugu faanin(efosos-2:8)
waan rabbaa inaan ku xoogaysdo rabbiga iyo xoogga itaalkiisa(efosos-6:10)marna isku haleen.
maayo jidhka (filboy.3:3)waayo hubka dagaal kayagu ma aha xagga jidhka laakiin xoog bay
leeyihiin ilaah hortiisa in qalcada lagu dumiyo (2korintos-10:4)
waan rumeysnahay in oo ciise masiix amar oo dhan samada iyo dhulka laygu siiyey (matoyos-28:18)
waan rumeysnahay isagoo ah madaxda taliye kasta oo amar kasta(kolosay-2:10) waan aamisanahay wax
kastana wuxuu ka hoosaysiiyey cagahiisa oo wuxuu isaga madax wax kasta ka sarreeyaa ugadhigay
kiniisadda(efesos-1:19-23)haddaba ilaa kadembeeya laakiin ibliiska hor joogsada. (yacquub.4:7)
wuu idinka carari doonaaye.
waan rumeysnahay oo waad garandoontaan runta .runtiina waa idin xorayn doontaa(yooxanaa-8:32)
laakiin haddeynu nuurka ku soconno siduu isaguba nuurka ugu jiro wehelnimo ayaynu isla wada
wadaagnaa . oodhiiga ciise masiix oowiilkiisa ah wuxuu inaga nadiifiyaa dembi oo dhan .(yooxanaa.1:7)
waxaannu baabi.innaa murannada iyowax kasta oosarreeya oo aqoonta ilaah iska sarraysiiya oo
fikir kasta maxbuus baannu ka dhignaa. si uumasiix u addeeco.(2korintos-10-5)qorniin kastaa wuxuu
ku ahaaday ruuxa ilaah oo waxtar buu u leeyahay waxbaridda. iyo hagaajinta. iyo edbinta xagga
xaqnimada.(2timo-3:15-17)laakiinse innagoo si jacayl ah ruta ugu hadlayna aynu wax walba ku
korno xaggiisa. kan madaxa ah oo ah masiixa(efesos-4:15) ha ku saqraamina khamriga rabshadu
ku jirto .laakiinse ruuxu ha indinku buuxsamo.(efesos:5:18)laakiin markuu kan ruuxa runta ahu yimaado, wuxuu idinku wadi doonaa runta oo dhan, waayo, isagu iskama hadli doono, wuxuuse ku had doonaa wuxuu maglo, wuxuuna idiin sheegi doonaa wax imanaya. (jooxanaa.16:13) Laakin waxaan leeyahay, Ruuxa ku socda, kolkaas aydnaan damaca jodhka yeelahay,(galatiya, 5:16) Kuwa Ciise Masiix waxay iskutallaabta ku qodbeen jidhka iyo kacsigiisa xaaraanta ah iyo damacyadiisa sharka ah (Galatiya 15:24).
Xubnihiinnana dembiga ha u siinina sida qalabka xaqdarrada, laakiin Ilaah isa siiya sida idinkoo ah kuwa ka soo noolaaday kuwii dhintay, xubnihiinnana Ilaah u siiya sida galabka xaqnimada.(rooma 6:13;12:1,2)
Haddaba, walaalayaalow, waxaan idinku baryayaa Ilaah naxariistiisa inaad jidhkiinna Olaah u siisaan sida allabari nool oo qoduus ah oo Ilaah ku farxo, waana cibaaadaysigiinna caqliga leh. 2. Ha u ekaanina dadka ifkan, laakiinse ku beddelma cusboonaanta maankiinna inaad hubsataan waxa ay tahay doonista Ilaah oo wanaagsan oo isagu ku farxo oo kaamilka ah.
laakin amarka dhammaadkiisu waa jacayl ka soo baxa qalbi daahir ah niyo wanaagsan iyo rumay sad aan labaweji lahayn. (timoteyos, 1:5) Kolkaasu ku yidhi isaga, Waa inaad Rabbiga ilaahaaga ah ka jeclaataa qalbigaaga oo dhan iyo naftaada oo dhen iyo caqligaaga oo dhan. 38Kanu waa qaynuunka ugu weyn oo ugu horreeya.39 Ku labaad oo u ekina waa kan. Waa inaad deriskaaga u jeclaata sida naftaada. (Matayous 22:37-39)
injiilka matayos cutubka 18:19-20 waxay inoo sheegaysaa in dukashada wada jirka ahi ay ka miisaan weyn tahay tan kelida ha,taas waxa caddeeyey sayid ciise masiix oo yiri haddii laba idinka mid ahu dhulka ku heshiiyaan wax kasta oo ay baryaan way uga ahaan doontaa xagga Aabahayga samada jooga,waayo meeshii anniga magacayga labo qof isugu yimaadaan meeshaa annigu waan dhex joogaa.
.Qirashadii dembiga iyo cafintiisii
hadaba sidan u tuko addiga oo dembigaaga qiranaya oo ku baryootan magaca sayid ciise masiix dhehna:
seyidow in badan ayaan si qarsoon u dembaabay aqoonna kuuma lahayn inaad anniga daraaday dembiyadayda u dhimatay una sare kacday,maanta waxaan garawsaday naxariistaada iyo jacaylkaaga,waanna kuu mahadinayaa, waanan ka xumahay xumihii hore ee aan gudcurka ku sameeyey,waan ka toobad keenay taas waxaanan kaa baryayaa inaad i ilaalisid oo aad igu hagtid jidka wannaagsan ee toosan Rabbiyow waan kugu mahadcelinayaa inaad dembiyadaydii cafiday waanan kuu adeegayaa inta aan dunidan ku noolahay.
waxaan rumaysnahay illaaha aabbaha ah, qaadirka oo uumay samada iyo dhulka iyo ciise masiix oo ah inankiisa madiga ah inuu yahay seyidkeena in ruuxa quduuska ah ay ka uuraysatay oo ay dhashay maryan oo bikrad ah,oo ku hoos silcay bantayoos bilaatoos,oo iskutalaabtana lagu qodbay uu dhintay,lana aasay maalintii 3aad ka sare kacay,samadana aadey oo ay u ahaatay inuu fariisto gacanta midig ee illaah,aabaha qaadirka ah.
halkaana uu ka imaan doono inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba.waxaan rumaysanahay ruuxa quduuska ahkaniisadda caalamiga ah sare kicidda jidhka iyo nolosha daa,imka ah-aammiin.